Apple inopomerwa kutyora CalTech's Wi-Fi patents | Ndinobva mac
Apple inopomerwa kutyora kodzero dzeCalTech dzeWi-Fi
Iyo patent system ndiyo inokonzeresa kumatare, uye Apple haisi mutorwa kune aya mamiriro. Kupomedzerwa kwazvino kunobva California Institute of Technology o Caltech. Iwo maCaltech patents anotaurwa mune ino kesi akaiswa pakati pemakore 2006 uye 2012, uye tarisa pa IRA / LDPC macode. Ivo vanoshandisa yakapusa encoding uye ekumisikidza matunhu ayo anoitirwa kugadzirisa mashandiro uye huwandu hwehuwandu hwehuwandu. Iwo iwo matekinoroji akafanana arikushandiswa mukati mematanho 802.11n Wi-Fi y Wi-Fi 802.11ac, ayo anoshandiswa mune zvakawanda zvigadzirwa zveApple.
Mhosva inopokana neApple yakaitwa mu California Federal Dare, uye inoti izvo zvigadzirwa zveApple, kusanganisira iPhone, iPad, Mac, uye kunyange iyo Apple Watch shandisa encoders, zvinoreva kuti Apple iri kutyora mana patent.
Apple inogadzira uye inotengesa zvigadzirwa zveWi-Fi zvinosanganisira IRA / LDPC encoders uye madhodhi anokanganisa izvi patent. Zvigadzirwa zvinokanganisa izvi patents ndeizvi: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Uye, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 5, iPad Mhepo, iPad Air 2, iPad Pro, iPad Mini4, iPad Mini 3, iPad Mini 2, MacBook Mhepo, kunyangwe iyo Apple Watch.
Mukati meimwe sutu, CalTech inotorawo Broadcom zvarinotaura futi kutyora zvakafanana patents. Izvi zvingave zvine musoro, tichifunga kuti Broadcom ndeimwe yevatengesi veApple veWi-Fi machipisi. Aya machipisi akaiswa mune dzakasiyana siyana zvigadzirwa zveApple zvinozivikanwa, kusanganisira iyo MacBook Pro Retina, MacBook Air, uye mamwe maMacs.
Apple ndeimwe yevatengi vakuru veBroadcom. Muna 2012, 2013, uye 2014, kutengesa kuApple kwakamiririra 14,6%, 13,3%, uye 14,0% yemari yemubhadharo ye Broadcom Corp.
Hatizive kuti izvi zvichapera sei, uye kuti chii chicha bvunza Apple kutyora izvi patent. Asi chatinoziva ndechekuti akakumbira a juri rekutongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inopomerwa kutyora kodzero dzeCalTech dzeWi-Fi
Apple Pay inowedzera rutsigiro kune BMO, TD uye Scotiabank yekuCanada
Memo dzeWWDC 2016 dzakaparadzirwa